Ajụjụ - GUODA (Tianjin) sayensị na teknụzụ mmepe Inc.
Ọnụahịa anyị na-agbanwe dị ka ọnụ ahịa anyị na mpụga mpụga anyị si dị. Biko kpọtụrụ anyị iji nweta ọnụọgụ ego ọhụụ na ozi ndị ọzọ.
Anyị nwere ọnụọgụ iwu pere mpe maka iwu mba ụwa, mana ọnụ ọgụgụ ziri ezi anaghị edozi dabere n'ụdị ịnyịnya ígwè ịchọrọ. Agbanyeghị, a ka ga-anabata ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịre ahịa pere mpe karịa. Naanị kpọtụrụ anyị ka ị nweta nkọwa zuru ezu banyere ịnyịnya ígwè ndị ị lekwasịrị anya! Obi dị anyị ụtọ ịgwa gị okwu.